मन्त्रिपरिषद् विस्तार : गोकुल र महेश हिस्स - News 88 Post
मन्त्रिपरिषद् विस्तार : गोकुल र महेश हिस्स
June 10, 2021 N88LeaveaComment on मन्त्रिपरिषद् विस्तार : गोकुल र महेश हिस्स
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दुई विश्वासपात्र हुन्, गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेत । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा यी दुवैले शक्तिशाली मन्त्रालय ताकेका थिए । बस्नेतले प्रधानमन्त्रीपछिकै शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए भने बाँस्कोटा पूर्वतत अवस्थामा सञ्चारमन्त्रीको हैसियतले सरकारमा फर्किन चाहन्थे । तर, दुवैको योजना यसपटकका लागि असफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । तर, उनले विस्तार गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद् आफ्नालाई रिझाउन मात्रै सीमित हुने भएको छ । १७ सदस्य भएको मन्त्रिमण्डलमा अब ८ जना मात्रै थपिन बाँकी छ । त्यसमध्ये ८ जनाको सूची प्रधानमन्त्रीले तयार पारिसकेका छन् ।
तीमध्ये गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी छानिएका छन् । उनी प्रतिनिधिसभामा विपक्षी सांसदले ल्याएको प्रस्तावमा सरकारपक्षीय सांसदको रुपमा नियमापत्ति जनाउन प्रखर सांसद मानिन्थे ।
त्यस्तै, कैलालीमा शेरबहादुरपत्नी आरजु राणालाई हराएर चर्चामा आएका नारदमुनी रानालाई बन मन्त्रलयको जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । यसअघि उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका इश्वर पोखरेलले पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी मोहन बानियाँले पाउने भएका छन् ।
आफूलाई गृहमन्त्री नबनाइएपछि महेश बस्नेतले पोखे रिष, हेर्नुस् यस्ताे छ उनकाे आक्रोश
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफ्नो राजनैतिक जीवनमा पद प्राप्ति ठुलो बिषय कहिले नबनेको र पार्टी निति , नेतृव र निर्देसन सदैब पालना गरेर अगाडि बडेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि उनले सामाजिक संजालमा लेख्दै पार्टी भित्र मात्र होइन बाहिरका मान्छेलाई समेत प्रभाब र दबाब पर्ने गरी काम गरेको बताएका छन् ।
नेता महेश बस्नेतले अफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुरमा आम जनताको र देशभर को एमाले कर्यकर्ता र युवा पंक्तिको मन जितेरै बसेको बताएक छन् । पटक पटकको मन्त्री मण्डलको पुनरगठनमा आफ्नो नाम ब्यापक चर्चा हुने गरेको र आफ्नो सहयोद्धा कमरेडहरु बनाउने पक्षमा र बनाउनै हुदैन भन्ने पक्षमा ब्यापक लागेको बताएका छन् ।
नेता महेश बस्नेतले लेखेका छन्, “मेरो राजनैतिक जीवनमा पद प्राप्ति ठुलो बिषय कहिले बनेन्। पार्टी निति , नेतृव र निर्देसन सदैब पालना गरेर अगाडि बडेको छु।
परिभाषित काममा सदैब आफ्नो दक्षता देखाएको छु। पार्टी भित्र मात्र होइन बाहिरका मान्छेलाई समेत प्रभाब र दबाब पर्ने गरी काम गरेको छु। अफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुरमा आम जनताको र देशभर को एमाले कर्यकर्ता र युवा पंक्तिको मन जितेरै बसेको छु।
पटक पटकको मन्त्री मण्डलको पुनरगठनमा मेरो नाम ब्यापक चर्चा हुने गर्दछ्। मेरो सहयोद्धा कमरेडहरु बनाउने पक्षमा र बनाउनै हुदैन भन्ने पक्षमा ब्यापक लाग्नु हुन्छ्।
हो। मेरो सफलतामा आफ्नो भलो र कोही आफ्नो राजकाज सकिन्छ भन ठान्छन । मेरो बिरोधि साथीहरुलाइ झन धेरै धन्यवाद छ ।जस्को कारण म हरेक पलमा सचेत भएर कदम चाल्दछु।त्यो नै महिले सिकेको सिकाई हो र उपलब्धि पनि!
कतिपय मिडियाले मेरो नाम जोडेर म आक्रोसमा छु। गुटफेर्दैछु जस्ता समाचार लेखिरहेका छन्। तेस्तो भ्रममा नपरौ म जहाँछु तेही छु र म जे छु तेही छु। अझै जोस जाँगर र उर्जाका साथ लाग्नेछु। मेरो राजनैतिक जीवनमा बिकाश गर्न खोजेको नयाँ अभ्यास समय क्रममा थप पुष्टी हुनेछ्।”
नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा शपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सिफारिसमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा आज नियुक्ति, हेरफेर र विस्तार गरी पूर्णता दिनुभएको थियो ।
नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासहित मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी थप आठ जनालाई सहभागी गराई २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो । यही जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि यो दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हो । पछिल्लो पटक गत वैशाख ३० गते ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीले वैशाख ३१ गते पहिलो र यही जेठ २१ गते दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
शपथ लिनेमा गृहमा खगराज अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ज्वालाकुमारी साह, वन तथा वातावरणमा नारदमुनि राना, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा गणेशकुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी मोहन बानियाँ मन्त्री हुनुहुन्छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीका उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आशाकुमारी विकलाई वन मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पदको शपथ गराउनुभएको थियो । समारोहमा राज्यका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।
सञ्चारमन्त्री बनेकी नैनकलाकाे राजनीतिक याेगदान के हाे ? बादलकी श्रीमती मात्रै हुन त ? पूरा पढ्नुस्
ओलीका लागि ज्यान दिन्छु भन्नेहरूलाई नै ओली बा’ले बनाएनन् मन्त्री, यस्ताे छ भित्री कारण
माधवलाई सिद्धाउन यस्ता छन् ओलीका याेजना, ओलीकाे याे तुरुप देखेर ओली क्याम्प नै अचम्मित !
May 16, 2021 N88
थप ४ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
April 17, 2021 N88
May 31, 2021 N88